यिनै हुन् सरकारी अधिकृत जसले महिला प्रहरीलाई समेत छोडेनन् ! - jagritikhabar.com
यिनै हुन् सरकारी अधिकृत जसले महिला प्रहरीलाई समेत छोडेनन् !
१० पुस, काठमाडौं ।
नेपाल सरकारका एक अधिकृतमाथि एक गम्भीर आरोप लागेको छ । उनले एक महिला प्रहरीमाथि अनुचित कार्य गरेको आरोप लागेको हो । एक महिला प्रहरीलाई त्यस्तो गरेको आरोपमा रोल्पाको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुशील थापा पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
स श स्त्र प्रहरी बल नेपालकी जवान एक महिलालाई अनुचित कार्य गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले बताएका छन् । विवाह गर्ने भनेर ती महिलासँग थापाले त्यस्तो गर्ने गरेको र पछि विवाह गर्न नमानेपछि ती महिला प्रहरीले उजुरी हालेको स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रहरी महिलाले त्यस्तो गरेको भन्दै थापाबिरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा रोल्पा नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुशील थापा रहेका छन् । उनलाई रोल्पा प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । पक्राउपछि रोल्पा प्रहरीले थापालाई बाँके प्रहरीलाई जिम्मा दिएको बताइएको छ ।
बाँकेमा कार्यरत रहेकी महिला स श स्त्र प्रहरीले उनलाई आरोप लगाएकी थिइन् । पक्राउ परेका थापाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस कसुरमा ७ दिनको म्याद लिएर थापामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।